Motivations – စာအုပ်မြို့တော်
by MM Book City · Published April 23, 2019
အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား
အိန္ဒိယ သမ္မတပြောသွားတဲ့ မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လည်း တိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတို့ အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။ ဒီစာကို ဖတ် ပြီးသွားရင် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ငါတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ တာဝန် သိစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယသမ္မတပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက...
၁။ ဘဝဆိုတာ တိုက်ပွဲတစ်ခုလိုပါပဲ လဲနေရင် ပြန်ထနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ ၂။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ဖြေရှင်းနေကြရတဲ့ ဘဝပုစ္ဆာတွေ ရှိပါတယ် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ အဓိကကျပါတယ်။ ၃။ တခါတလေ မဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်လာရတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်လိုက်ပါ ၄။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးလုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ၅။ အမှားတစ်ခုလုပ်မိတဲ့အခါ ဝန်ခံတတ်ပါစေ။ ၆။ ဘဝသီအိုရီတွက်ချက်ရတဲ့အခါ မှားမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ အမှားဆိုတာ အတွေ့အကြုံရဲ့...
by MM Book City · Published April 16, 2019
လူတစ်ယောက် မဖြစ်မနေ ပြုမူနေထိုင်သင့်သည့် အချက်( ၅) ချက်
(၁)အတတ်ပညာတစ်ခုခုကို တတ်ကျွမ်းအောင်သင်ကြားပါ အတတ်ပညာဆိုတာ အတန်းပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။အသိပညာ ၊ လူမှုက်ဆံရေးပညာ ၊ အကောင်းအဆိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သော အတွေးအခေါ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတစ်ခုခုကို မဖြစ်မနေ သင်ကြားတတ်မြောက်ထားသင့်တယ်။ (၂)အလုပ်တစ်ခုခုမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါ အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ချမ်းသာသာ ဆင်းရဲရဲ အလုပ်တစ်ခုတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်ရှိမှ လူရာဝင်တတ်သလို လူလေးစားယုံကြည်ခံရမှာပါ။ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုသလိုပဲ အလုပ်လုပ်နေမှ ဂုဏ်တက်မှာပါ။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ရာမှာ အကျိုးအမြတ်က ပထမ မဟုတ်ဘဲ...
တစ်ခါတလေတော့…… သာမှပေါင်းချင်တဲ့ လူတချို့ရဲ့ အပြုအမူကို…… ဘာတစ်ခုမှ မတုန့်ပြန်လိုက်ပေမဲ့…… စိတ်ထဲမှာတော့ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အနိုင်လိုသူကို အရှုံးပေးရင် နှလုံးအေးတယ်ဆိုပေမဲ့…… တစ်ဖက်စွန်းရောက်လွန်းတဲ့ သူတွေကို…… အရှုံးပေးလိုက်ရတာ…… ကိုယ့်နှလုံးသားတွေ နာကျင်ရတဲ့အကြောင်း…… ကိုယ်သာ အသိဆုံးပဲ။ ရန်ကိုရန်ခြင်း မတုန့်ပြန်ချင်လို့သာ…… အရှုံးပေးခဲ့ရပေမဲ့…… ကိုယ်လည်း လူထဲက လူတစ်ယောက်မို့…… စိတ်နာမိခဲ့တယ်ဆိုတာ ဝန်ခံရဲပါတယ်။ တရားမျှတမှုဆိုတာ နေရာတိုင်း မရှိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့…… လူတစ်ဖက်သား ထိခိုက်နစ်နာသွားစေမဲ့…… တချို့သော အကြောင်းအရာတွေမှာ…… အနစ်နာခံသင့်လည်း...
by MM Book City · Published April 13, 2019
ထီးမပါတဲ့ ကလေးဟာ မိုးထဲမှာ ပိုအပြေးမြန်တတ်ပါတယ်။ ဦးတည်ချက်မရှိတဲ့လူဟာ ဦးတည်ချက်ရှိတဲ့ လူအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်။ ဘွဲ့ဒီဂရီဆိုတာ ကြေးတံဆိပ်၊ အရည်အချင်းဆိုတာ ငွေတံဆိပ်၊ လူမူဆက်ဆံရေး အတတ်ဟာ ရွှေတံဆိပ်ပါ။ အချစ်ဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်လို့ရတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ယော့က်ျား ကောင်းဟာ မြူစွယ်မူဒဏ်ကို ကောင်းကောင်းခံနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုသလို ၊ မိန်းမကောင်းဟာ အထီးကျန်တဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်။ လှပတဲ့ နတ်သမီးဆိုတာ လူ့လောကမှာ တကယ်မရှိပါဘူး၊ စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ မိန်းခလေးဆိုတာပဲ...
ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေသည့် အကျင့်လေးများ
⭐️ မနက်စာ မစားသုံးခြင်း ⭐️ မနက်စာ မစားခြင်းက လိုအပ်တဲ့ သကြားဓါတ် မရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းကို လျော့ကျစေ နိုင်ပါသည်။ ⭐️အိပ်စက်ချိန် မလုံလောက်ခြင်း⭐️ သင့် ဦးနှောက် အနားပေးရန် အတွက် အိပ်စက်ချိန် အလုံအလောက် မရှိ်ရင် ဦးနှောက်ဆဲလ်များ သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ ⭐️ အစားလွန်ခြင်း ⭐️ အစားအစာ အများကြီး စားသုံးခြင်းက သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ⭐️လေထု ညစ်ညမ်းခြင်း⭐️ ဦးနှောက်က အောင်စီဂျင်များစွာ လိုအပ်သော အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသောလေထုကို...
တံငါ နားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆုိုး ဘယ်လိုလူ အနားမှာနေရင် ဘယ်လို ခရီးသွားမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ၊ ဖဲရိုက်ဖေါ်ဟာ ဖဲဝိုင်းသွားဖို့ အမြဲဖိတ်ခေါ် သလို အရက်သောက်ဘက်ကလည်း အရက်ဝိုင်းသွားဖို့ အမြဲစည်းရုံးနေမှာပဲ၊ မိတ်ဆွေအစစ်ဆိုတာ သင့်ကို တိုးတက်နေအောင် အမြဲ တွန်းအားပေးနေတဲ့သူပါ။ လူ့ဘ၀ရဲ့ ကံအကောင်းဆုံးဆိုတာ ရွှေငွေရတနာ ကောက်ရတာ မဟုတ်သလို သ်ိန်းထီပေါက်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ သင့်နားမှာ မိတ်ဆွေ အစစ်ရှိတာက ရေရှည်မှာ ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ၊ သင့်ဘ၀ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ...
by MM Book City · Published April 11, 2019
The value of life (ဘ၀တန်ဖိုး)
တစ်နေ့မှာ လူငယ်လေး တစ်ဦးဟာ အဖိုးဖြစ်သူ အနားကို သွားပြီး… “ဘ၀တန်ဖိုး ဆိုတာ ဘာလဲ… အဖိုး..?” ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်… ဒါနဲ့ အဖိုးဖြစ်သူလည်း ကျောက်တုံး တစ်တုံးကို လူငယ်လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပြီး… “ကဲ… ဒီကျောက်တုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘယ်လောက် ရှိလဲ ဆိုတာ သွားစုံစမ်းခဲ့ချေ… ဒါပေမဲ့ ရောင်းတော့ မရောင်းခဲ့နဲ့နော်…” ဆိုပြီး မှာလိုက်တယ်… လူငယ်လည်း အဖိုးပေးလိုက်တဲ့ ကျောက်တုံးကို ယူပြီး...
လိုက်နာမှတ်သား ရှေးရှေးတုန်းက အဆိုအမိန့်များ
(၁) မဟောင်တတ်သော ခွေးသည် ကိုက်တတ်၏။ စကားမပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေသူသည် မိုက်တတ်၏။ (၂) အကောင်းပြောလျင် ချက်ချင်း ၀မ်းမသာပါနှင့်၊ မကောင်းပြောလျင်လည်း ချက်ချင်း ၀မ်းမနည်းပါနှင့်။ (၃) ကန်ဖူးသော မြင်းသည် ကန်ချက်ကို မမေ့။ လူသည်လည်း အကျင့်ပျက်ကို မမေ့။ (၄) ထိုင်သည့်အခါ အောက်ကို ကြည့်ပါ။ ထသည့်အခါ အပေါ်ကို ကြည့်ပါ။ (၅) မပုပ်သော အသီးကို ပိုးမထိုး။ မရှိသောသူကို...
ကမ္ဘာကျော် Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးကို ထူထောင်ခဲ့သူ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ဘီလီယံကြွယ်သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ်စ်ကို ကောင်းကောင်းသိကြပါသည်။ သူ့ဘဝ သူ့အကြောင်းလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သလို လူငယ်တို့အတွက် စံနမူနာကောင်းတစ်ရပ်အနေနှင့် လိုက်လံကျင့်ဆောင်စရာတွေကလည်း များပါသည်။ ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က အပြီးတိုင်ထွက်ခဲ့သည်။ သူကျောင်းမပြီးသေးဘဲ ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ပူးပေါင်းပြီး Microsoft ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်သည်။ ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲရေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို မည်သူကမှ စိတ်ကူးမရသေးမီ စွန့်ဦးစွန့်စားကာ...
Categories Select Category Motivations (305) Uncategorized (102) ကျန်းမာရေး (2) ပုံပြင် (27) ဝတ္ထုတို (3)
စာအုပ်မြို့တော် © 2019. All Rights Reserved.